PHOTOS. Uurka Christina Milian: dhalaalaha Matt Pokora, wuxuu muujiyaa caloosha wareegaya dhar qurux badan - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE PHOTOS. Christina Milian Pregnant: Muuqaalka xiisaha leh ee Matt Pokora, waxay ku soo bandhigeysaa caloosheeda wareegsan dhar isku xiga
Christina Milian umuuqataa inuu si buuxda ugu noolaan karo uurkiisa. Hada uur bay leedahay cunuggeeda labaad, iyo kii ugu horreeyay ee lammaanahooda la wadaaga Matt Pokora, Fannaanka waligiis fursad looma seegi doono shaaca ka qaad cunugga aad iyo aad u badan oo wareegsan. Iyo kadib snapshots dabaasha Halka ay ku raaxaysatay qorraxda iyo badda, heesta ayaa soo bandhigtay sawirro cusub, halkaas oo ay ka soo bandhigtay dhar qurux badan oo casaan qurux badan leh oo loo yaqaan 'Zcrave', kaas oo muujinaya in caloosheeda ku fajacday.
"Jacaylkaaga i sii waanad labalaabaysaa"Waxay ku qortay qoraal cinwaan ah 'clichés', oo laga soo qaatay Tel Aviv. Intii ku xigta dhawaaqa weyn ee wadnaha u eg, Christina Milian sidoo kale gacmihiisa ku yaal buuq qurux badan oo ubax ah. Hadiyad fiican oo ka timid gacalihiisa? hadda socdaal ku jooga Faransiiska ee albumkiisa Pyramides, Matt Pokora aad ayuu ugu joogaa saaxiibkiis, maadaama uu aad u jecel yahay inuu la kulmo wiilkooda yar. Si uusan u seegin dhalashada cunuggiisii ​​ugu horreeyay, heesta ayaa go’aansatay si loo fududeeyo jadwalkiisa.
Toddobaad nasasho ah oo loo hibeeyay qoyskiisa
Sidaa darteed, inuu ku hoggaamiyo mustaqbalkiisa miyuusigga, iyo sidoo kale noloshiisa cusub ee aabe, Matt Pokora horeba uga fikiray wax walba: Waa wax fudud in la abaabulo. Safarka hadda, waxaan isku xiraa taariikhaha. Shaki iigama jiro maalinta xigta, inaan sameeyo nasasho usbuuc kasta laba toddobaad si aan u arko qoyskeyga. Mashaariicda aan wado, wax badan ayaan ku sababayn doonaa sanad dugsiyeedka, ee ma ahan in wiilkeygu iskuulka uga tagayo dugsi. Marka, hal sanad dugsiyeed oo ku yaal Faransiiska, mid kalena Los Angeles ", ayuu ku sharaxay tiirarka Nice-Matin. Horeyba barnaamij dhan ayuu ugu hayaa wiilka yar, oo heesahiisa uu jecel yahay inuu ku hadlo labada luqadood isla markaana ku qubeysto labada dhaqan ee waalidkiis.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/photos-christina-milian-enceinte-la-cherie-de-matt-pokora-radieuse-affiche-son-v-1046842